महिनावारीको समयमा धेरै पेट दुखे के गर्ने ? |
Home अन्य महिनावारीको समयमा धेरै पेट दुखे के गर्ने ?
चिकित्सकका अनुसार महिनावारीको बेला शरीरमा हर्मोनमा परिवर्तन आउँछ। हर्मोनको परिवर्तनले पाठेघरको भित्री तहमा रहेको पत्र (इन्डोमेट्रियोसिस) महिनावारीकै क्रममा झर्छ। महिनावारीको क्रममा पाठेघरभित्रबाट रगत पनि बाहिर निस्कन्छ। त्यो पत्र तथा रगत बाहिर निकाल्न पाठेघर प्राकृतिक रूपमै खुम्चिन्छ।
यो खुम्चेर रगत बाहिर निस्कने क्रममा तल्लो पेट दुख्ने गर्छ। यो समस्या कुल महिलाको १० प्रतिशतमा देखिन्छ। महिलाको शरीरको बनोट र मनोसामाजिक अवस्थाअनुसार कसैलाई बढी दुखेको अनुभव हुन्छ भने कसैलाई कम।
उपचार- यीमध्ये कुन कारणले हो, त्यसको पहिचान गरी उपचार गर्न सकिन्छ। तर अविवाहित महिला जसको बच्चा पनि भएको छैन र पाठेघरभित्र कुनै रोग छैन भने खास उपचार छैन। यस्तो अवस्थामा केही घरेलु उचपारबाट पनि दुखाइ न्यून गर्न सकिन्छ।
जस्तो कि महिनावारीको बेला तातो झोल कुरा खाने, हटब्यागले तल्लो पेट सेक्ने या तेलले विस्तारै मालिस गर्न सकिन्छ। अन्य कारणले भए चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम औषधि सेवन गर्नुपर्ने डा. दंगाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘जुनसुकै कारणले तल्लो पेट दुखेको भए पनि पहिला कारण थाहा पाएर मात्र उपचारतिर लाग्नुपर्छ।’
लक्षण- माहिनावारीको बेला तल्लो पेट दुख्नु, यौन सम्बन्धको बेला दुख्ने
महिनावारीको बेला बढी रगत जाने, तल्लो पेट दुखेमा
यस्तो अवस्थामा केही घरेलु उचपारबाट पनि दुखाइ न्यून गर्न सकिन्छ। जस्तो कि–, महिनावारीको बेला तातो झोल कुरा खाने, हटब्यागले तल्लो पेट सेक्ने,तेलले विस्तारै मालिस गर्ने।-(डा. गणेश दंगाल काठमाडौं मोडेल अस्पताल )